အဝတ်အစား ဝတ်ဆင်ရာမှာ မပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်(၃)ချက် - Pissaya News
၁. ယောင်္ကျားလေးတွေပဲ ဝတ်ဆင်ကြတဲ့ အဝတ်အစားတွေ
ယောင်္ကျားလေးတွေအတွက်ပဲ သီးသန့် ထုတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီမျိုးတွေကို ဝတ်ဆင်ခြင်းကို တစ်ချို့က စတိုင်လ်ဆိုပြီး ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ အပြင်ထွက်တဲ့အခါ ဝတ်ဆင်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
၂.ဝတ်လို့ ရရင် ပြီးတာပဲဆိုပြီး ဈေးပေါ၍ စတိုင်လ်မရှိတဲ့ အဝတ်အစားကို ရှောင်ပါ။
ဈေးပေါတဲ့ အဝတ်အစားဆိုရင် သိပ်ကောင်းလှတယ်မရှိတတ်ပါဘူး။ အရောင်၊ အသား၊ဒီဇိုင်း တစ်ခုခုမှာတော့ ချို့ယွင်းနေတတ်ပါတယ်။ လိုက်ဖက်တယ်ဆိုတာမျိုးက နည်းပါတယ်။
၃.ကိုယ်နဲ့ မတော်တဲ့(ကျပ်နေတဲ့) အဝတ်အစားမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ် အလှပြချင်လွန်းရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့ ကျပ်သိပ်နေတဲ့ အဝတ်အစားမျိုးကို ရှောင်ပါ။ ကိုယ်အတွက်လည်း မလွတ်လပ်သလို သူများတွေ အမြင်မှာလည်း စတိုင်လ်ကျနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
အဝတျအစား ဝတျဆငျရာမှာ မပွုလုပျသငျ့တဲ့ အခကျြ(၃)ခကျြ
၁. ယောင်ျကြားလေးတှပေဲ ဝတျဆငျကွတဲ့ အဝတျအစားတှေ
ယောင်ျကြားလေးတှအေတှကျပဲ သီးသနျ့ ထုတျထားတဲ့ အင်ျကြီမြိုးတှကေို ဝတျဆငျခွငျးကို တဈခြို့က စတိုငျလျဆိုပွီး ဝတျဆငျကွပါတယျ။ ဒါဟာ ဘယျလိုမှ အဆငျမပွနေိုငျပါဘူး။ အပွငျထှကျတဲ့အခါ ဝတျဆငျခွငျးကို ရှောငျကွဉျသငျ့ပါတယျ။
၂.ဝတျလို့ ရရငျ ပွီးတာပဲဆိုပွီး ဈေးပေါ၍ စတိုငျလျမရှိတဲ့ အဝတျအစားကို ရှောငျပါ။
ဈေးပေါတဲ့ အဝတျအစားဆိုရငျ သိပျကောငျးလှတယျမရှိတတျပါဘူး။ အရောငျ၊ အသား၊ဒီဇိုငျး တဈခုခုမှာတော့ ခြို့ယှငျးနတေတျပါတယျ။ လိုကျဖကျတယျဆိုတာမြိုးက နညျးပါတယျ။
၃.ကိုယျနဲ့ မတျောတဲ့(ကပျြနတေဲ့) အဝတျအစားမြိုးကို ရှောငျကွဉျပါ။
ခန်ဓာကိုယျ အလှပွခငျြလှနျးရငျပဲ ဖွဈဖွဈ ကိုယျနဲ့ ကပျြသိပျနတေဲ့ အဝတျအစားမြိုးကို ရှောငျပါ။ ကိုယျအတှကျလညျး မလှတျလပျသလို သူမြားတှေ အမွငျမှာလညျး စတိုငျလျကနြမှောမဟုတျပါဘူး။
ဆီးချိုရောဂါရှိသူများ စားသင့်သည့် အစားအစာများ
မကွာခငျမှာ ရုံတငျပွသတော့မယျ့ ကွိုးဖုနျး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီး
မင်းသန့်မောင်မောင်အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ မေသန်းနု